Ny fampiharana sokay haingana
Ny QUICKLIME dia novokarina avy tamin'ny vatosokay misy fifangaroan'ny kalsioma sy magnesium carbonates. Na ny quicklime avo amin'ny kalsioma na ny quicklime dolomitika dia novokarina tamin'ny alàlan'ny fanamafisana ny fametrahana vatosokay vita amin'ny vatosoa ao anaty lafaoro hatramin'ny hafanana 900 degre. Ity dingana ity dia antsoina hoe fizotran'ny fanaovana kajy. T ...
Fampidirana fohifohy ny lafaoro sokay mitsangana
Famaritana ny vokatra Ny lafaoro mitsivalana dia manondro fitaovana fanaovana kajy sokay hamoaka ny clinker tsy tapaka ao amin'ny tapany ambany amin'ny sakafo ambony. Izy io dia misy vatan'ny lafaoro mitsivalana, manampy sy mamoaka fitaovana sy fitaovana fanadiovana. lafaoro mitsivalana azo zaraina ho f ...
Toetra mampiavaka ny lafaoro sokina mitsitsy angovo sy mahavariana ny tontolo iainana
Ny lafaoro mitsivalana dia manondro fitaovana fanaovana kajy sokay hamoaka ny clinker tsy tapaka ao amin'ny faritra ambany amin'ny sakafo ambony. Izy io dia misy vatan'ny lafaoro mitsivalana, manampy sy mamoaka fitaovana sy fitaovana fanadiovana. Ny lafaoro sokay mitsangana dia azo zaraina amin'ireto karazana efatra manaraka ireto ...
Olana tokony hialana amin'ny famokarana lafaoro sokay tia tontolo iainana
1) Ny haben'ny vatosokay dia lehibe loatra: ny hafainganam-pandehan'ny kajy amin'ny vatosokay dia miankina amin'ny mari-pana izay hahitana ny haben'ny zana-kazo misy sokay miaraka amin'ny ambonin'ny vatosokay. Amin'ny maripana sasany, ny tahan'ny fanaovana kajy amin'ny vatosokay dia miankina amin'ny haben'ny vatosokay.
Famoronana Hydroxide Kalsioma, Manao Hydroxide Kalsioma, Kalsioma oksida sy kalsioma Hydroxide, Fitaovana famokarana kalsioma Hydroxide, Fitaovana Hydroxide Kalsioma, Anaran'ny varotra calcium oxide,